အမေးအဖြေများ - ရှန်ကျန်းပလြော့နည်းပညာ Co. , Ltd
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED ကိုဗီဒီယိုဝေါလ် vs LCD ကို: သင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
သင်တစ်ဦး visualization system အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာနေလျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းဗီဒီယိုကမြို့ရိုးကို display တွေပုံစံမျိုးစုံ, အရွယ်အစားနှင့်နည်းပညာများတစ်မိန်းမောတွေဝေအကွာအဝေးအတွင်းရောက်လာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအမြားအပွားထုတ်လုပ်သူတူညီသောနည်းပညာများကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကိုအသုံးနှင့်နည်းပညာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရသောအကြောင်းကိုပဋိပက္ခဖြစ်တောင်းဆိုမှုများလုပ်ကြောင်းသတိပြုမိကြပေမည်။
နားလညျ, ဒီဝယ်လက်သူတွေအတွက်ရှုပ်ထွေးစရာတွေဖြစ်လာစေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ (တစ်ခါတစ်ရံ "LED-LCD ကို" ဟုခေါ်) "LCD ကို" နှင့် "LED မီး" (တစ်ခါတစ်ရံ "တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED ကို" ဟုခေါ်): များစွာသောလူအဘို့, ရှုပ်ထွေးမှုများတွေထဲကအထူးသဖြင့်အချက်နှစ်ခုလူကြိုက်များ display ကို types များအကြားခြားနားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အလားတူအသံသော်လည်း, LCD ကိုများနှင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED ကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသော features နဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူနှစ်ခုကွဲပြား display ကိုနည်းပညာများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီအကျိုးကျေးဇူးများကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? သူတို့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ? သငျသညျသူတို့အားမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ရုန်းကန်နေလျှင်, ငါတို့သည်ကူညီဖို့ဒီနေရာမှာနေပါပြီ!
LCD ကို (အရည် crystal display) ဗီဒီယိုနံရံနဲ့စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်နှစ်ဦးစလုံးစျေးကွက်များတွင်နှစ်ပေါင်းလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ပြားချပ်ချပ် panel က display ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကအများဆုံးစမတ်ဖုန်းများတွင်အသုံးပြု display ကိုအမျိုးအစား, ကွန်ပျူတာမော်နီတာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်ရဲ့ - အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ပြီးသား LCD နည်းပညာအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ကိုသုံးကြသည်။
LCD ကိုပြား Polarized ဖန်နှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းအကြားတည်ရှိနေပေမယ့်အရည်ကြည်လင်နေတဲ့အလွှာ၏ရေးစပ်နေကြသည်။ liquid crystal အရည်များကဲ့သို့စီးဆင်းပေမယ် crystals တူသော oriented နိုင်မော်လီကျူးသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်လက်ရှိအရည် crystals မှလျှောက်ထားလျှင်, crystals အလင်းပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြု, shift ။ နောက်ခံအလင်း display ကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေဖို့အတွက်ဖန်နောက်ကွယ်မှစီစဉ်ပေးနေကြသည်ဒါကြောင့်အရည် crystals, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်လုပ်ကြပါဘူး။ အယ်လ်အီးဒီ (light-emitting diode) ယနေ့အသုံးပြုသောနောက်ခံအလင်း၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်သူတို့ရဲ့ LED-backlit LCD ရဲ့သက်တမ်းဟာစျေးကွက် "LED-LCD ကို။ "
LCD ရဲ့သက်တမ်း, တောက်ပတတ်နိုင်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အမြင်အာရုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေး။ LCD ကိုတစ်ခုအလွန်က high-resolution ကိုနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် LCD ကိုဗီဒီယိုကရိုးကို ချွန်ထက်အသေးစိတ်စာသား, ပုံများ, နှင့်ဗီဒီယိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအားသာချက်များ LCD ရဲ့သက်တမ်းဟာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုခန်းကနေတက္ကသိုလ်သုတေသနစင်တာများဗီဒီယိုမြို့ရိုးအပလီကေးရှင်းတစ်ခုအကွာအဝေး, အဘို့ကြီးစွာသော option ကိုလုပ်ရမည်။
LCD ရဲ့သက်တမ်းဟာတစ်ဦးကိုဗီဒီယိုသည်မြို့ရိုးကိုဖန်တီးရန်အတူတကွ tiled သောအခါ, bezel (သို့မဟုတ်ချုပ်ရိုး) ကတစ်ဦးချင်းစီပြားအကြားမြင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED မီးများကဲ့သို့ချောမွေ့စွာ display ကိုအမျိုးအစားများမှ LCD ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒါဟာအားနည်းချက်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထုတ်လုပ်သူ display ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမျိုးဆက်သစ်နှင့်အတူ bezel-width ကိုလျှော့ချနေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင်အသစ်များ LCD ရဲ့သက်တမ်းပေါ် bezel အများကြီးလျော့နည်းသိသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကို LED သလဲ?
LCD ကိုကဲ့သို့ပင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED (တစ်ခါတစ်ရံရုံ "နဲ့ LED" ဟုခေါ်) Light-emitting diode (အယ်လ်အီးဒီ) ၏အသုံးပြုမှုကိုပတျသကျတဲ့ပြားချပ်ချပ်-panel က display ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED ကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ LCD ကနေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED Display ကိုများတွင်အလွန်သေးငယ်သောအယ်လ်အီးဒီရာပေါင်းများစွာတစ် panel ကိုအပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားကြသည်နှင့်မျှမတို့အရည်ကြည်လင်သို့မဟုတ် Polarized ဖန်ကိုအသုံးပြုသည်။ အဲဒီအစား (သူတို့ LCD ကိုပြသမှုအတွက်လုပ်ပေးကဲ့သို့) တစ်ဦးနောက်ခံအလင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်၏, တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်အတွက်အယ်လ်အီးဒီ display တွေပုံရိပ်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်လုပ်ရန် LED ။ တစ်ခုချင်းစီကို LED မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဗို့အားကလျှောက်ထားသောအခါအရောင်အလင်းကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတဲ့သေးငယ်တဲ့အလင်းမီးသီးဖြစ်ပါတယ်။ အနီ, အစိမ်း, အပြာအယ်လ်အီးဒီပြွတ်ပုံရိပ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော Full-အရောင် pixels ကိုဖန်တီးသည့် panel ကိုအပေါ်အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED ကိုတစ်ချိန်ကဧရာပြင်ပ display တွေအတွက်အဓိကအသုံးပြုတဲ့အနိမ့်-resolution display အမျိုးအစားခဲ့ပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပိုမိုသေးငယ်တဲ့အယ်လ်အီးဒီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြစ်နိုင်သမျှများများစားစားပိုမိုမြင့်မားဆုံးဖြတ်ချက်တွေစေပြီ။ ဤရွေ့ကားမကြာသေးခင်ကတိုးတက်မှုတွေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်မိုးလုံလေလုံကဗီဒီယိုနံရံများများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကို option ကို LED စေပြီ။
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်မျှ bezel ရှိသည်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေလုံးဝဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွ tiled နိုင်ပါတယ်ပြား LED ချောမွေ့စွာသောဗီဒီယိုသည်မြို့ရိုး ။ ပြသမှုကိုလည်းအလွန်အမင်းတောက်ပသော, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, စွမ်းအင်ထိရောက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အကောင်းဆုံးကိုအရောင်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသည်နှင့်ယနေ့မဆို Display ကိုအမျိုးအစားနှုန်းထားများရရှိနိုင် refresh LED ။ ဤရွေ့ကားအရည်အသွေးတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် High-သက်ရောက်မှုပုံရိပ်ယောင်များတောင်းဆိုကြောင်းအကြီးစားဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်နှင့်အခြား application များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှု LED ပါစေ။
စျေးနှုန်းများလာမယ့်နှစ်အတွင်းလျော့ချဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်ပေမယ့်, Higher-resolution ကို LED နံရံများ LCD ရဲ့သက်တမ်းထက်ပိုစျေးကြီးသည်လက်ရှိတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီနည်းပညာကိုအများဆုံးဖောက်သည်များအတွက်လက်လှမ်းမမီထဲကနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တောင်အမြင့်ဆုံး-resolution display နေဆဲ LCD ကိုကနေရရှိနိုင်တဲ့ ultra-high resolution မပေးနိုငျပါ LED ။ အကောင်းဆုံးသောအသေးစိတျအာရုံလိုအပ်ကြောင်းအသုံးပြုမှု-ဖြစ်ပွားမှုများအတွက်, LCD ကိုပြသမှုနေဆဲပိုမိုနှစ်သက်နိုင်ပါသည်။
နှင့်ဘုံအကြိုးကြေးဇူးမြား - - LCD ကိုများနှင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် LED ကိုဗီဒီယိုကနံရံကျွန်တော်တို့ဟာကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်အချို့သောအလင်းကိုသွန်းကကူညီပေးခဲ့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်နှစ်ဦးစလုံးဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ display ကိုနည်းပညာများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင့်ရဲ့တိကျတဲ့လျှောက်လွှာများနှင့်ဘတ်ဂျက်မှသာသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံး option ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။